Zaw Aung's Page - Myanmar in Singapore
Share Blog Posts (80)Discussions (5)Events in SingaporeGroups (2)PhotosPhoto AlbumsVideos Zaw Aung's Likes Zaw Aung's Friends
View All Zaw Aung's Groups
Zaw Aung has not received any gifts yet
Zaw Aung's Page
Zaw Aung postedablog postဖခင်များနေ့ဂုဏ်ပြုခြင်း (ခူနာ - ရေးသူ၊ ကိုကိုကြီး)ကိုကိုကြီး၊ ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၃“အဖေများနေ့” အတွက် အမှတ်တရ , “ကိုကိုကြီး” ရဲ့ “ခူနာ”(၁)“ဖခင်ဘုရင်ကြီးမှာ မကြားလိုပါ xxx မကြား xx လိုပါ xxxသားလှလေးရဲ့လက်မှာ ခူနာပေါက်တဲ့အခါ xxxဘုရင်ဗိမ္မိသာရ ချစ်လှတဲ့ဘုရင်ကြီးခမျာ xxxအို xx အေး xx အို xxx တေးဆိုညည်းကာသားငယ်ရဲ့ဝေဒနာကိုသာ xxx ပျောက်ပါစေတော့ xxxအာခံတွင်းထဲမှာ xxx သွင်းကာငုံထားရာ xxအနာပြည်မှည့် လေသောအခါ xxx အာခံတွင်းထဲမှာ xxxအာခံတွင်းထဲမှာ xxx ဖောက်ပြန်လေတော့တာ xxxဖခင်မှာမြိုခါချရှာ”အသံကဝေမလို့တောင် ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုပါရမီရှင်ရဲ့ ဗိမ္မိသာရ…See Moreyesterday 0
၀တ်မှုန် commented on Zaw Aung's blog post မြန်မာပြည်အိမ်မြေဈေးနှုန်းအကြောင်း ၂၀၁၂ Myanmar Property Market Analysis"2015 Asian Free Trade မတိုင်မီ၊ အရှေ့ တောင်အာရှအိမ်မြေဈေးနှင့်ညီအောင် SME ပြည်တွင်းပြည်ပ၊ ရင်းနှီးသူများအတွက် အိမ်မြေ၊စက်မှုဇုံမြေများ အာစီယံဈေးနှုန်းဖြင့် ဖေါ်ထုတ်မည်။ မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ၊ လက်ဝါးအုပ်စီးပွားရေးမှ လွတ်ရန် ယခု၊ သွင်း-ထုတ်ကုန်…"FridayZaw Aung postedablog postလျှပ်စစ်နှင့်လောင်စာရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု၊ တရုပ်ပြည်နမူနာယူနေသောမြန်မာ လျှပ်စစ်နှင့်လောင်စာရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု၊ တရုပ်ပြည်နမူနာယူနေသောမြန်မာတရုပ်ပြည်မကြီး လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုသမိုင်းလျှပ်စစ်သုံးနိုင်မှ လူများဝင်ငွေတိုးပွား၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုများမှ လွတ်မည်ဟု အကြမ်းဖျင်းပြောနိုင်သည်။ မီးလင်း၊ လျှပ်စစ်စက်မှုတိုးတက်ရေးအတွက်...တရုပ်ပြည်ကြီးသည် ၁၉၉၀ ပြည့်မှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည်ဟု ယေဘူယဆိုနိုင်သည်။ တရုပ်ပြည် ၁၀နှစ်တာ ၂ခုအတွင်း လျှပ်စစ်တိုးတက်မှုတွင် ၁၉၉၀-၂၀၀၀ အတွင်း ၁၂၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀-၂၀၁၀ အတွင်း ၁၉၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ယခုလည်း တိုးချဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ယူနစ်ကို ၁၀ဆင့်…See MoreJun20
Zaw Aung postedablog postစပါးခွံဖြင့်စက်ရုံများလည်ပတ်ခြင်း Biomass Power Plantမြန်မာနိုင်ငံသည် စပါးအလွန်ထွက်သောကြောင့် ဆန်၊ဆီစက်အများသည် စပါးခွံကိုမီးဖြင့် ဘွိုင်လာရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်ကို သုံးကြသည်။ လယ်ယာ ဘေးထွက်ကုန်များ ဥပမာ ဆီ၊ပဲ ကြိတ်စက်များမှ ကျန်သောအခွံ၊ကြိတ်ဖတ်များမှာ တရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးချရန် တရုပ်ပြည်သို့တင်ပို့ကြသည်။ တရုပ်ပြည်မှ ကြက်စာများအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောင်းချသည်။ ကောက်ရိုး၊ ပြောင်းရိုး၊ အသီးနှံအကြွင်းကျန် စသည့်အရာများကိုလည်း ကျွဲနွားအစာအဖြစ်၎င်း၊ ယခုအခါ compost ဓါတ်မြေသြဇာအဖြစ်၎င်း၊ အခြားမြေသြဇာများအဖြစ်၎င်း ပြန်လည်အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။…See MoreMay 16 0
၀တ်မှုန် commented on Zaw Aung's blog post မြန်မာပြည်အိမ်မြေဈေးနှုန်းအကြောင်း ၂၀၁၂ Myanmar Property Market Analysis"ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအသစ် ... လူပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအလုပ်ရှုပ်နေချိန် ၂၀၁၁မှာ .. ခရိုးနီနဲ့ငွေအလွန်ချမ်းသားသူများရဲ့ ထိုးနှက်မှုကြောင့် မြေဈေး၊ အဆမတန်တက်ခဲ့ရတယ်။ အလွန်ပေါများလှတဲ့မြေတွေ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကို အစိုးရပိုင်မြေတွေ တစ်ပုံကြီးကျန်ပါသေးတယ်။…"May 14Zaw Aung postedablog postလျှပ်စစ်နှင့်မြန်မာပြည် (နေရောင်ခြည်လျှပ်စစ်စက်ရုံဆောက်မယ်၊ ကမ္ဘာမှာတတိယအကြီးဆုံးတဲ့)မြစ်ကြီးနားမြို့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တစ်ခုမှ ဆိုလာပြား 2013လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်းများ - ၀င်ငွေရှိရင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများစွာ သုံးနိုင်ပါမယ်။ အမေရိကားမှ တအိမ်လုံးနွေးနေအောင် ချမ်းအေးတဲ့လမှာ Heater ဖွင့်ထားတော့ တစ်လကို ဒေါ်လာတစ်ထောင်ကျော် ကုန်ကျတာမျိုး.. ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အမေရိကားဝင်ငွေနဲ့မထောင်းသာပေမဲ့ ဆက်တိုက်ကုန်ကျလာရင်…See MoreMay 11 0
Zaw Aung commented on ၀တ်မှုန်'s blog post တကယ်ဝင်ငွေရစေတဲ့ အွန်လိုင်းအလုပ်တွေ"ှSupporting Linkhttp://www.360nobs.com/2012/12/make-money-online-scams/ လူတွေကတော့ တစ်လဒေါ်လာ၇၀၀၀ ရလိုစိတ်နဲ့ ဒေါ်လာ၃၀လောက်ကို ရင်းနှီး အလိမ်ခံနေဦးမှာပါပဲ...။"May 11Zaw Aung commented on ၀တ်မှုန်'s blog post Tax System - သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏သမီးနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လိုခြင်း (အမှတ်၃)"အခွန်ကောက်ခံမှု စိစစ်ကြပ်မတ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းPublished on May 9, 2013 by ဒီဗွီဘီ · No Commentsအစိုးရအဖွဲ့ဟာ အခွန်ကောက်ခံမှု စနစ်တကျ ဖြစ်ရေးနဲ့ အခွန် ပြည့်ပြည့်၀၀ရေရး ရည်မှန်းချက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို့ဆိုပြီး အခွန်ေကာက်ခံမှု စိစစ်ကြပ်မတ်ေရး…"May 9phyuphyuzin liked Zaw Aung's blog post မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် မိမိကျရာ အခန်းကဏ္ဍများမှ ပါဝင်ရန် MTP မှဖိတ်ခေါ်ခြင်း...May 9KoPu liked Zaw Aung's blog post မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် မိမိကျရာ အခန်းကဏ္ဍများမှ ပါဝင်ရန် MTP မှဖိတ်ခေါ်ခြင်း...May 8Zaw Aung postedablog postမြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် မိမိကျရာ အခန်းကဏ္ဍများမှ ပါဝင်ရန် MTP မှဖိတ်ခေါ်ခြင်း...ဆွေးနွေးသူများ၊ ဒေါက်တာတင်လှိုင်၊ ဦးလှမောင်ရွှေ၊ ဦးကိုကိုကြီး နှင့် MTP ဦးကျော်ဇောခိုင်နှင့်အခန်းနားမှုးအမျိုးသမီး၂ဦး ရေးသူ - အေးငြိမ်း(၁) အခြားသူများတော့ မပြောတတ်ပါ။ ကျွန်တော့်အနေနှင့်မူ သည်ပွဲ (မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်နှင့် စင်ကာပူ ရောက် မြန်မာ တတ်/သိပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍစကားဝိုင်း - Panel…See MoreMay70
Zaw Aung postedablog postကော်ပီစနစ်တကျလုပ်ကြပါစို့ - Myanmar SME Industry, Farm Industryကော်ပီစနစ်တကျလုပ်ကြပါစို့ ဆရာကြီးပီမိုးနင်း ၁၉၃၀ခုလောက်က ရေးခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင် လေထဲတွင်ပျံမည့်လေယာဉ်ပျံသန်းဖို့ တီထွင်နေသည်ဟု သတင်းဖတ်လိုက်ရသောကြောင့်၊ စိတ်ပျက်မိကြောင်း၊ သူများနိုင်ငံများတွင် လေယာဉ်ကို ဥဒဟိုမောင်းနှင်နေပြီဖြစ်ရာ ထိုလေယာဉ်ကိုဝယ်ယူပြီး၊ ပြည်တွင်းတွင်အသုံးချရမည့်အစား အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်ခံပြီး လေယာဉ်ကို အစမှစတင်တီထွင်နေသော မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးပီမိုးနင်း၏ တိုးတက်ရေး Attitude စိတ်နေသဘောထား စာများသည် ယခုခေတ်တိုင်အောင် အသုံးကျနေဆဲ။ သူ၏စာအုပ်များမှာ…See MoreApr 19 0
Zaw Aung commented on Ko Nge's blog post လူထုမပြောင်းဘဲ တိုင်းပြည် မပြောင်းနိုင်ပါ!"လူထုမပြောင်းနိုင်ရင် အစိုးရပြောင်းတိုင်းလည်း တိုင်းပြည်မပြောင်းနိုင်ပါဘူး...လို့ ကိုငယ်ရေးထားနဲ့ Mr.Moon, Kyaw Ze Ya Tun, May Kyaw Shin ကွန်မင့်များကိုလည်း သေချာဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ...ဂျပန်၊အမေရိကန်တို့ အခုတိုးတက်နေတာ…"Mar 25Zaw Aung commented on Aye Nyein's blog post ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်အူတစ်ရစ် ထပ်အကြပ်ခံရခြင်း"အဖြေရှာခြင်းစင်ကာပူကုတ်ကပ်၊ နေလို့လဲ မဖြစ်လို့ ပြန်သွားရသူများစွာရှိနေပါပြီ။ စင်ကာပူမှာ လစာဘယ်လောက်ပေးသလဲဆိုတာလဲ S.pass ကို တစ်ထောင်ကျော်ပဲပေးတဲ့ ပွဲခ ဒေါ်လာ ၃ထောင်အထက် ပေးပြီးကို လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာကျွန်ဇတ် ဆက်ခင်းနေပါတယ်။ တကယ်တော့ စင်ကာပူမှာ…"Mar 23Zaw Aung postedablog postလူသားများအတွက GRACEမီချီကန်ပြည်နယ် ထရာဗာစ် မြို့ ကလေးတွင် မီးငယ်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ မီးငယ်၏ မိဘများသည် ရှေးရိုးဆန်သည်။ ခေတ်ဆန်လှသော မီးငယ်ကို အမျိုးမျိုး တားမြစ်ပိတ်ပင်သည်။ နှာခေါင်းတွင် ကွင်းကလေးတပ်ခြင်း၊ ခေတ်ဆန်သော သီချင်းများကို နားထောင်ခြင်း၊ စကတ်တိုတို ၀တ်ခြင်း တို့ကို မိဘများက အကြိမ်ကြိမ် ဆူငေါက်ကာ တားမြစ်တတ်သည်။ မကြာခဏလည်း အိမ်ပြင်မထွက်ရန်…See MoreMar 22 0
hmonedine commented on Zaw Aung's blog post ဆက်ရန်ရှိသေးသည်၊ သီတဂူဆရာတော်ပြောစကားနဲ့သက်တန့်ချိုရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်"သူတို့နိုင်ငံကျတော့ သစ်တောထိန်းသိမ်းတယ့်အနေနဲ့ ဝါးတူနဲ့တောင် အစာမစားရတော့ပဲ ဇွန်းနဲ့ခရင်းကိုပဲ သုံးခိုင်းကြတော့တာ၊ တို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ အဆီအနှစ်လာထုတ်ယူနေကြတာကိုသိနိုင်ကြပါစေ.. မြင်နိုင်ကြပါစေ။"Mar 21 More... RSS
Living in Singapore for 20 years with family
Zaw Aung's Blog
Posted on June 17, 2013 at 1:47pm0Comments
ကိုကိုကြီး၊ ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၃
“အဖေများနေ့” အတွက် အမှတ်တရ , “ကိုကိုကြီး” ရဲ့ “ခူနာ”
“ဖခင်ဘုရင်ကြီးမှာ မကြားလိုပါ xxx မကြား xx လိုပါ xxx
သားလှလေးရဲ့လက်မှာ ခူနာပေါက်တဲ့အခါ xxx
ဘုရင်ဗိမ္မိသာရ ချစ်လှတဲ့ဘုရင်ကြီးခမျာ xxx
အို xx အေး xx အို xxx တေးဆိုညည်းကာ
သားငယ်ရဲ့ဝေဒနာကိုသာ xxx ပျောက်ပါစေတော့ xxx
အာခံတွင်းထဲမှာ xxx သွင်းကာငုံထားရာ xx
အနာပြည်မှည့် လေသောအခါ xxx အာခံတွင်းထဲမှာ… Continue လျှပ်စစ်နှင့်လောင်စာရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု၊ တရုပ်ပြည်နမူနာယူနေသောမြန်မာ
Posted on June 2, 2013 at 10:49am0Comments
လျှပ်စစ်နှင့်လောင်စာရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု၊ တရုပ်ပြည်နမူနာယူနေသောမြန်မာတရုပ်ပြည်မကြီး လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုသမိုင်းလျှပ်စစ်သုံးနိုင်မှ လူများဝင်ငွေတိုးပွား၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုများမှ လွတ်မည်ဟု အကြမ်းဖျင်းပြောနိုင်သည်။ မီးလင်း၊ လျှပ်စစ်စက်မှုတိုးတက်ရေးအတွက်...တရုပ်ပြည်ကြီးသည် ၁၉၉၀ ပြည့်မှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည်ဟု ယေဘူယဆိုနိုင်သည်။ တရုပ်ပြည် ၁၀နှစ်တာ ၂ခုအတွင်း လျှပ်စစ်တိုးတက်မှုတွင်… Continue စပါးခွံဖြင့်စက်ရုံများလည်ပတ်ခြင်း Biomass Power Plant
Posted on May 16, 2013 at 2:07pm0Comments
မြန်မာနိုင်ငံသည် စပါးအလွန်ထွက်သောကြောင့် ဆန်၊ဆီစက်အများသည် စပါးခွံကိုမီးဖြင့် ဘွိုင်လာရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်ကို သုံးကြသည်။ လယ်ယာ ဘေးထွက်ကုန်များ ဥပမာ ဆီ၊ပဲ ကြိတ်စက်များမှ ကျန်သောအခွံ၊ကြိတ်ဖတ်များမှာ တရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးချရန် တရုပ်ပြည်သို့တင်ပို့ကြသည်။ တရုပ်ပြည်မှ ကြက်စာများအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောင်းချသည်။ ကောက်ရိုး၊ ပြောင်းရိုး၊ အသီးနှံအကြွင်းကျန် စသည့်အရာများကိုလည်း ကျွဲနွားအစာအဖြစ်၎င်း၊ ယခုအခါ compost ဓါတ်မြေသြဇာအဖြစ်၎င်း၊… Continue လျှပ်စစ်နှင့်မြန်မာပြည် (နေရောင်ခြည်လျှပ်စစ်စက်ရုံဆောက်မယ်၊ ကမ္ဘာမှာတတိယအကြီးဆုံးတဲ့)
Posted on May 11, 2013 at 7:30am0Comments
မြစ်ကြီးနားမြို့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တစ်ခုမှ ဆိုလာပြား 2013
လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်းများ - ၀င်ငွေရှိရင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများစွာ သုံးနိုင်ပါမယ်။ အမေရိကားမှ… Continue AddaBlog Post
At 10:29pm on November 16, 2012, မနတ်သမီး said… ဟုတ်ကဲ့ ကို Zaw Aung ရေ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ At 7:08pm on October 3, 2012, Zaw Aung said… ကျွန်တော့ဇနီးကတော့ ရှောက်ရေးထားတယ်..လို့ ဝေဖန်လေ့ရှိပါတယ်။ အနီးကပ် အတိုက်အခံ၊ ဝေဖန်သူရှိနေတာ ကောင်းပါတယ်..။ At 2:55pm on July 11, 2012, Aung Phyo Paing said… ဦးဇော်အောင် ခင်ဗျား။ဦးရေးတဲ့Blog အားလုံးနီးပါးကျွန်တော် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုလူလတ်ပိုင်းများသာမက၊လူကြီးလူငယ်မရွေး အသိပညာ၊ဗဟုသုတတိုးပွားစေတဲ၊့ လမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့ဦးရဲ့Blogတွေကိုဝေဖန်နိုင်လောက်အောင်အရည်အချင်းကျွန်တော်မှာမရှိပါခင်ဗျား။ရှိခဲ့လျင်လည်းဝေဖန်စရာမလိုလောက်အောင်ကို ဦးရဲ့Blogတွေကကောင်းမွန်ပါတယ်ခင်ဗျား ။ No comments yet!
5. “လေထဲတွင်လွင့်ပျံ့ ခဲ့သော လွင့်ပျံ့နေဆဲဖြစ်သော”
6. ဖခင်များနေ့ဂုဏ်ပြုခြင်း (ခူနာ - ရေးသူ၊ ကိုကိုကြီး)
7. ယောက်ျား-မိန်းမ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ နိယာမသဘောတရား (အပိုင်း- ၂)
8. ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ statement တွေထုတ်၊ သဘောထားတွေကြော်ငြာနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့ စီးတွေဆီကနေ အဲဒီစာရွက်တွေတောင်းပြီး ဒန်အိုးဒန်ခွက်နဲ့ လဲရင်အတော် အသုံးဝင်မယ်.. အမေရိကား၊ဂျပန်၊စင်ကာပူ..စတဲ့နိုင်ငံမှာ…
9. ခြောက်ပြစ်ကင်း လူသားများနှင့်နိုင်ငံ့အရေး
10. အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား၏ မယ်မြ
13. လိုတာပေး၏ မပေး၏ လိုတာရ၏မရ၏
14. စကာင်္ပူမှ အလုပ်ရှာရန်တဖြေးဖြေးပိုခက်ခဲလာသလို ဆက်လက်နေထိုင်ရင်လဲ ပိုခက်ခဲလာတဲ့နှစ်တွေပါ!